Lasopy Madrid - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
lasopy130 minitraOlona 4
Ity lovia ity dia saika isaky ny Alahady ao an-tranoko. Io ilay sakafo ankafizinao amin'ireo zanako vavy ary tsy maninona na fahavaratra na ririnina, satria angatahin'izy ireo foana aho handrahoana azy ireo, indrindra ho an'ny lasopy (araka ny filazany).
Tsy noeritreretiko mihitsy hoe mety ho tsara amin'ny Thermomix®, ankoatr'izay salama. Avy amin'ny boky ilay fomba fahandro Tena ilaina saingy tsy nanao izany aho raha tsy namporisika ahy ny mpanolotra ahy, Maribel, satria izy no nanao izany ary nilaza tamiko fa tonga lafatra izany. Inona no antony!
Mamporisika anao aho hanao ity fomba fahandro ity, satria lovia tena feno sy manankarena tokoa. Raha manana ianao hena nandrahoina, azonao atao ny manararaotra azy hahalasa matsiro Croquette masaka.
1 Lasopy Madrid
2 Te hahafantatra ny fomba hanaovana an'io fomba fahandro io ve ianao?
Resipeo iray izay tsy tokony hanjavona ao amin'ny bokin-tsakay.
Fotoana manontolo: 2h 10M
400 g ny sotro akoho masaka, nosasana sy nalatsaka
Tendrony 1 ham
250 g hena pudding mainty
Bacon vaovao 1 sotro
2 l. ny rano
Tongolo mainty 1 tongolo
Chorizo ​​semi-sitrana 1
Karaoty 2, voaso
Ovy peel 1
Akoho 250 g (ampiana akoho akoho)
Menaka oliva 70 g
Paprika mamy 1/2 sotrokely
Paty mofomamy manify 100 g (cabellín)
Ao anaty vera dia manampy sotro fihinam-bary efa masaka iray sotro izahay, apetraho ny sobika ary ao anatiny no ampianay ny taolana, ny hena ary ny henan-kisoa.
Manampy rano izahay hamenoana ny 2 l., Izany hoe, 1 cm. ambanin'ny sisin'ny harona sy ny sira. Izahay dia manao fandaharana 60 minitra, mari-pana 100º ary hafainganam-pandeha 1.
Fonosinay amin'ny aluminium foil ny saosisy ra sy ny chorizo.
Amin'ny faran'ity fotoana ity dia apetrantsika amin'ny toerany ny kaonteneran'ny varoma ary ampidirintsika ao anatiny ny trondro, legioma, akoho, saosisy ary chorizo. Mandrakotra sy mandrindra programa izahay 40 minitra, maripana varoma ary hafainganam-pandeha 1.
Rehefa tapitra ity fotoana ity dia esorinay ny kaonteneran'ny varoma sy ny tahiry.
Miaraka amin'ny fanampian'ny notch amin'ny spatula dia esorinay amin'ny harona ny sobika ary atsofohy ny ron-kena.
Ao anaty lovia no ametrahantsika ny hena, hena, taolana, bacon, akoho, saosisy ra ary chorizo, manontolo na mizara roa na telo. Mafana hatrany izahay.
Ao anaty vera dia ampio ny tongolo lay sy ny diloilo. Izahay dia manao fandaharana 4 segondra, hafainganam-pandeha 6.
Miaraka amin'ny spatula, ampidinintsika ny sisa tavela amin'ny rindrina sy ny sarony, mankany amin'ny lelany. Izahay dia manao fandaharana 4 minitra, mari-pana 100º ary hafainganam-pandeha 1.
Izahay dia manampy ny laisoa efa masaka sy ny paprika. Izahay dia manao fandaharana 5 minitra, hafanana 100º ary hafainganana sotro.
Manompo ao anaty lovia izahay, miaraka amin'ireo sifotra sy legioma.
Manasa ny vera izahay ary manampy ny ron-kena voasivana. Izahay dia manao fandaharana 5 minitra, mari-pana 100º ary hafainganam-pandeha 1.
Ampianay ny paty sy ny programa 5 minitra, mari-pana 100º ary hafainganam-pandeha 1.
Arotsaka ao anaty ravina iray izahay ary aroso miaraka amin'ireo hena, akoho amam-borona ary legioma.
Raha tsy tianao ny saosisy ra dia azonao esorina izany ary asio saosisy 2.
Te hahafantatra ny fomba hanaovana an'io fomba fahandro io ve ianao?
Safidy iray hafa hanaovana lovia matsiro kokoa, indrindra ho an'ireo ankizy izay manahirana ny mihinana ny hena nandrahoina, dia ireo baolina na mpanamory fiaramanidina ianao.
Ity fika kely ity dia nolazain'i Rosa Catalán ahy, renin'ny sakaizan'ny zanako vavy, ataony amin'ny sakafom-bavy foana izy ireo ary tian'ny zanakao izany. Tamin'ny fotoana nandrahoako nahandro dia tao an-tranoko ny zanany vavy, nilaza tamiko izy fa matsiro be izy ireo ary tia azy ireo ny zanako vavy, ka hatrizay dia ataoko foana izy ireo (Rosa, misaotra betsaka anao nizara ahy ity fomba fahandro ity sy ny maro hafa !). Ny zanako vavy dia mihinana azy ireo am-pahatapahana miaraka amin'ny lasopy.
Raha sahy manao azy ianao dia mila afangaro fotsiny ilay nitsitsy, sira kely, dipoavatra mainty kely (tsy voatery), atody iray ary afangaro amin'ny fork mandra-pahatonga azy hifangaro tsara. Aorian'izay dia asio mofomamy kely ary afangaro indray. Raha tena malefaka dia azonao atao ny manampy mofomamy kely kokoa sy ny sisa mandra-pahazoanao koba azo fehezina hanaovana baolina. Manaraka izany, ny baolina na ny henan-kena lehibe dia atao ary apetraka ao anaty harona miaraka amin'ireo ambin'ny hena.
Fantatrao izao, raha manan-janaka ianao ao an-trano izay mahita fa sarotra ny mihinana ny hena avy amin'ny laoka, dia manolotra anao ny antsasaky ny akoho amam-borona mainty ary mameno ny fomba fahandro amin'ny baolina.
Fanazavana fanampiny - Croquette masaka
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Carnes, Sakafo rezionaly, Tsotra, legioma, Mihoatra ny 1 ora sy 1/2, Lasopy sy menaka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Carnes » Lasopy Madrid
Inona ny hena amin'ny saosisy ra?
Eto Catalonia dia mahazatra be ireo mpanamory fiaramanidina, tiako izy ireo !!!
Ny fiovaovan'ny resanao dia ny fametrahana ny fe akoho, apetrako ny tratrany, ary avy eo miaraka amin'ny hena, dia manao croquette matsiro aho hiaraka amin'ny lasopy na hihinana azy ireo amin'ny andro hafa miaraka amin'ny salady kely.
Jessie, ny hena saosisy ra dia antsoina koa hoe "stilt" na "hock." Ao amin'ny tapany ambany amin'ny tongotra no misy an'io hena io ary misy gelatine, tonga lafatra amin'ny ron-kena, lasopy, sns.
Manao croquette amin'ny hena ambiny ihany koa aho. Napetrako ny rohy misy ny fomba fahandro an'ny ñas croquette izay ataoko: http://www.thermorecetas.com/2010/04/09/Receta-Thermomix-Croquetas-de-cocido/
Manantena Vicente dia hoy izy:
Raha te hahandro miaraka amin'ireo mangatsiaka ireo ianao, ny alahady dia hanao izany ao anaty thermo aho, hijery ny endriny, miaraka amin'ireo chickpeas tena manankarena avy amin'ny "cabins polendos", sa tsy izany Elena?
Hilaza aminao aho, oroka
Valiny tamin'i Esperanza Vicente
Tena tsara ny "CHICKPEAS AVY AMIN'NY TUERTO DE PIRÓN", avy amin'ny namantsika Jesús, avy any Cabañas de Polendos (Segovia)! Andraso, fa tsy maintsy alona ny andro mialoha ary andrahoy ao anaty “pressure cooker” ary andrahoy ao anaty Thermomix. Izany no antony ampiasako ny voanjo efa masaka. Tena mahay mahandro ianao, ka tsara tarehy aminao ny lasopy. Oroka.
Ana Goya Blasco dia hoy izy:
Soratako izany, satria tao anatin'ny dimy taona nivadiako dia mbola tsy nandrahoako mihitsy, marina fa tsy misakafo ao an-trano izahay. Raha tsy misy thermomix io ​​dia tsy heveriko akory izany ...
Valiny tamin'i Ana Goya Blasco
Manantena aho fa tianao izany, Ana, holazainao aminay. Mirary ny soa indrindra.
Ao amin'ny taniko dia tsy mametraka chorizo ​​ianao, raha tsy izany dia mitovy ary marina ny fisiany.
Manampy ovy koa aho, apetrako ao anaty varoma.
Izay no tiako, ny recette isan'andro sy ny sotro.
Marina izany, Thermo, ary betsaka noho izany ny toetrandro noho ny tsapanao fa lovia mafana avy amin'ny sotro. Oroka.
Elena, maninona ianao no tsy maintsy mampiasa zana-borona efa masaka? Isaky ny mahandro tsy misy thermomix aho dia mampiasa sipa kely ara-dalàna amin'ny alemana.
Manome kely ahy zavatra hividianana ireo amin'ny sambo.
Satria ny fomba fahandro amin'ny thermomix lentil, dia namboarina toy ny an'ny androm-piainany izy ireo.
Ana, tsy tiako ny mampiasa sakafo am-bifotsy noho ny preservatives, koa dia nanandrana nandraho akoho mialoha aho ary namono azy ireo tao anaty kitapo. Ka efa vonona foana ny sifotra rehefa mivoaka avy hatrany izy ireo.
Hevitra tsara izany, Silvia! Heveriko fa hataoko toy izao koa, mahandro vitsivitsy ao anaty lafaoro haingam-pandeha ary atsofohy amin'ny ampahany izy ireo rehefa ilaiko handrahoana sakafo. Misaotra betsaka, Silvia.
Salama Ana, ny lentil dia mila fotoana fohy fandrahoana, fa ny sifotra sy ny tsaramaso dia mila fotoana fahandro lava kokoa. Mampiasa zana-borona tsy masaka aho rehefa manana vahiny ary mahavita be dia be ary tsy vitako amin'ny Thermomix. Azonao atao ny mampiasa ny voajanahary fa raha mahandro azy ireo amin'ny rano ao anaty lafaoro hafainganana ianao dia manaova ity fomba fahandro ity. Raha manao azy ireo tsy masaka ianao dia ho mafy izy ireo satria maharitra fotoana lava.
mari carmen, tomelloso dia hoy izy:
Salama zazavavy, ataoko toy izao ary mivoaka tsara fa rehefa masaka ny sipa, ny hena ary ataoko atody mangatsiaka dia omeko lapoety vitsivitsy ary vonona hihinana, eto hoy izy ireo nahandro endasina ary tena tsara, haaaaa tsara ny sipa amin'nny sambo, mividy azy amin'ny mercadona aho ary tsara. SALODY TSARA
Valio i mari carmen, tomelloso
Tsara be ry Car Carmen!. Izaho koa mividy sipa kely masaka marika Hacendado ary mivoaka matsiro be izy ireo. Mirary ny soa indrindra.
Catalan Rose dia hoy izy:
Ny marina dia. Tena tsara ny pilote, na dia asiana poivre noir kely aza aho. Izany fomba izany dia mampahatsiahy ahy ny nataon'ny reniko sy ny nenibeko ho an'ny «Nadal»
Valiny tamin'i Rosa Catalan
Marina izany, Rosa. Tsy apetaho dipoavatra ho an'ny zazavavy, fa azo antoka fa tena mahasoa azy io. Hataoko tsy voatery atao ao anaty recette io. Averina indray, misaotra betsaka !.
Tsara ny fomba fahandro anao, tian'ny vadiko sy ny zanako lahy izy ireo, tohizo toy izao ary aza manahy momba ny andalana. Famihinana.
Salama Josefa, faly aho fa tianao izany. Ary manoloana ny tsipika, ny marina dia manandrana mikarakara azy io kely isika, heveriko fa mahasalama izany. Famihinana.
LAURA FELIPE MARTINEZ dia hoy izy:
Inona no fomba fahandro manankarena amin'ireto mangatsiaka ireto! Hataoko tsy ho ela izany, saingy tsy mazava amiko ny momba ny laisoa, apetrakao ao anaty varoma miaraka amin'ireo legioma rehetra avy eo ireo nendasina tamin'ny tongolo lay sy paprika? fa niara-nanompo daholo ve sa natao zavatra hafa? dia ny manompo ny laisoa masaka, tahaka izany koa.
Valio amin'i LAURA FELIPE MARTINEZ
Salama Laura. Azo aroso amin'ny masaka tsotra fotsiny izy io, saingy tiako ny endasina amin'ny tongolo lay sy paprika. Zava-tsiro. Ny rafozambaviko, ny reniben'ny vadiko ary tiako ny mihinana azy toy izao miaraka amin'ny ovy, karaoty ary akoho. Mirary ny soa indrindra.
LAURA PHILIP dia hoy izy:
mmm, hiezaka izahay, misaotra betsaka !!!
Valiny amin'i LAURA FELIPE
Tsy maintsy mahafaty ary ambonin'izany rehetra izany dia lasa maloto kely isika !!!
Fa manana fisalasalana ihany aho fa tonga ao anaty rano 3L ireo akora ireo, misy litatra izay afa-miala amiko… ..
Misaotra betsaka Elena! Diso aho ary nametraka 3 l. fa tsy 2 l. izay no mety. Efa nahitsiko izany. Misaotra betsaka anao nahamarika. Mirary ny soa indrindra.
Salama, manana fanontaniana roa aho:
1) apetrakao ao anaty harona miaraka amin'ny hena, taolana ary bacon ve ny tendrony ham?
2) tapahina ve ny laisoa? raha eny, amin'ny firy?
Misaotra betsaka anao noho ny fanampianao, ary indrindra indrindra, misaotra ny bilaogy, io no tena tiako indrindra momba ny resipeo Thermomix
Salama Victoria, ny tendron'ny ham dia nampiana tamin'ny voalohany miaraka amin'ny taolana, ny hena,… .. ary ny laisoa dia voadidy tsara ary apetraka ao amin'ny varoma miaraka amin'ireo legioma sy trondro. Mirary ny soa indrindra.
Salama! Tao an-tranoko androany no nohaninay tamin'io laoka tena tsara io. Tianay be ilay izy: manankarena be ny lasopy, ny mampalahelo dia ny tsy hivoahany bebe kokoa, ary tsara koa ny hena, indroa izahay no manana azy. Araka izany, na dia mitaky fotoana aza ny fomba fahandro dia mandoa kely ihany. Haveriko tsy misy fisalasalana izany.
Faly aho, Sonia!. Nihinana lasopy Madrid koa izahay, toy ny saika isaky ny Alahady. Mirary ny soa indrindra.
Salama Silvia sy Elena! Rehefa nividy ny thermomix aho dia nilaza tamiko izy ireo fa tsy azo atao ny lasopy satria kely fotsiny ny fahaizan'ny vera ary jerena izay ahitako ny fomba fahandro. Efa gaga aho fa tsy nahandro ity masinina ity, mila manandrana aho. Misaotra anao amin'ny olana atrehinao rehetra, ireo namana fantatro miaraka amin'ny thermomix dia ampirisihiko izy ireo hitsidika ny pejinao, iray ihany ny lesoka ao aminy ary izany dia ny engagesaaaaaaaaa, hahaha
Salama Conchi. Mandrosoa ary andramo ny laoka, matsiro. Misaotra betsaka anao nahita anay ary nankahery ny namanao hahita anay! Mirary ny soa indrindra.
Salama Elena. Voalohany indrindra, miarahaba anao aho satria misaotra anao aho namporisika ny tenako handray ny thermomix, izay nananako tao an-dakozia ho haingon-trano iray hafa. Ho fanampin'izay, nanomboka nanamboatra ny sasany amin'ny resinao aho ary mivoaka matsiro. Faly ny fianakaviako amin'ny fanovana ary izaho kosa, manana fahatokisan-tena kely kokoa, izay nilaiko. Tamin'ity faran'ny herinandro ity dia nanao lasopy cannelloni sy Madrid aho. Miandry ny mailaka ataonao isan'andro amin'ny resipeo vaovao aho hanandramana ahy. Misaotra betsaka anao nanamora ny fiainanay. Isabel
Salama isbael. Faly aho fa mampiasa ny Thermomix bebe kokoa ary indrindra fa tianao ny resinay. Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay.
Salama! Androany aho nanandrana ny laoka ary tianay be dia be izy, mivoaka matsiro. Tamin'ny andro hafa dia nandefasako teny taminao ny fomba fahandro ny lasopy haingana izay, araky ny anarany dia vita avy hatrany, efa voarainao ve? Lazaiko anao izany satria maika ianao dia ho afaka amin'ny olana amin'ny fanomanana lovia voalohany ao anatin'ny fotoana fohy hahaha. Misaotra tamin'ity bilaogy mahafinaritra ity.
Salama Conchi, faly aho fa tianao izany. Tsy mbola nahazo ilay recette aho, raha tianao izany dia andefaso aty amiko amin'ny: elecalde@gmail.com
Tian'ny zanako vavy ny lasopy ary tiako ny manandrana azy.
Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay.
Salama Elena! Vao avy nandefa anao ny fomba fahandro ho an'ny lasopy haingana, antenaiko fa raisinao avy amin'ny tsy fantatro izany ka lazao amiko ary halefako eto. Mirary ny soa indrindra.
Salama Conchi, nijery ny mailaka fotsiny aho ary mbola tsy nahazo. Alefaso aty amiko izy io. Misaotra anao.
Salama Elena! Ity ny fomba fanamboarana ny "lasopy haingana".
- elatra akoho 2 na tokam-borona akoho 2.
-Tsy sipa kely henjana mafy 15 na 20.
- vary vitsivitsy.
-1 taolana ham.
-2 pilina ron-kena akoho.
-1 litatra ny rano.
- paty manify.
-Ny sobika sy ny vary dia ampiana amin'ny vera ary vovoka amin'ny hafainganana 5-7-9.
-Atao amin'ny lolo ny lolo ary ampio ny ambiny amin'ireo akora sy fandaharana 20 minitra, hafanana 100, hafainganana 1.
-Rehefa tapitra ny fotoana dia ampiana ny paty, tsy ilaina ny mandahatra indray.
Ny ataoko dia alohan'ny ampidirina ny paty dia arotsako ny ron-kena mba tsy hahitana ireo sipa voatoto.
Araka ny ho hitanao dia tena tsotra izy io ary manankarena be. Manantena aho fa tianao izany. Miarahaba ary MANKASITRAKA AN'ity blôgy mahafinaritra ity.
Misaotra betsaka anao Conchi!. Hiezaka aho, hotantaraiko anao izany.
Salama Elena, androany dia namporisika ny tenako aho hanao ity fomba fahandro ity ... ary tsara. Misaotra anao, mamporisika ny tenako hahandro aho satria ny vadiko no mahandro ao an-trano. Ho hitako izay resipeo azoko atao rahampitso. fiarahabana
Faly aho fa tianao izany, Marga!. Mirary ny soa indrindra.
Izaho no manao ny recette ary mivoaka daholo ny rano avy amin'ny dingana voalohany rehefa mangotraka izy, marina fa ao anatin'ny harona no misy ny taolan-damosiko… izany ve no antony ??
Mamaly an'i Yoli
Toy izany koa ny tsy fahafantarako tsara ny recette ... rehefa milaza ny handatsaka ny rano hatramin'ny 1cm eo ambanin'ny sisin'ny harona ... ilay grimace an'io vera 2-litatra io ve no resahina? satria miaraka amin'ny harona ireo litatra roa dia miakatra saika hatramin'ny sisin'ny vera.
Raha azonao atao ny manazava izany ho ahy dia tiako be izany
Salama Yoli, miankina amin'ny marika 2-litatra na kely kokoa. Mirary ny soa indrindra.
Salama Yoli, heveriko fa izany no antony, mila manala rano ianao. Miaraka amin'ny taolana, ampio rano kely fotsiny. Mirary ny soa indrindra.
Salama namesake, manana ny Thermomix tm 21 aho ary tiako ho fantatra raha misy fomba hanamboarana ity fomba fahandro ity amin'ny masiniko. Amin'ny ankapobeny ny olana hitako dia hoe tsy manana kaontenera varoma aho. Afaka mieritreritra zavatra ve ianao? Ny marina dia tiako ny manao ny fianakaviako ho lakozia kely nentim-paharazana ary ilay iray arosonao dia toa matsiro. Misaotra ihany noho ny resipeo sy ny toro-hevitra.
Joseph Onty dia hoy izy:
Salama zazavavy, faly aho fa nahita ny bilaoginao hatramin'ny nanombohako an'ity ary tena fanampiana be ho ahy izany.
Nahavita fomba fahandro 3 aho ary ny iray dia nivoaka tsara (tsaramaso misy hombo) ary ny hafa toa izao, toy izao (ovy misy taolan-tehezana sy Madrid nandrahoina)
Amin'ny maha-zazalahy vao teraka ahy dia maneho hevitra momba ny fisalasalako aho:
Tao anaty laoka, ny ovy sy ny karaoty dia tsy vita ary ny hena, na dia vita tsara aza, dia nivoaka maina be (ny lasopy ankehitriny, ary ny trondro afangaro amin'ny laisoa mahatalanjona)
Tao anaty ovy dia saika nahazo ovy nopotsehina niaraka tamin'ny taolan-tehezana aho (izao dia tena tsara ny tsiro) eritreretiko satria tsy maintsy notapahiko ny ovy lehibe kokoa.
Nanaraka ireo fomba fahandro tamin'ny taratasy aho, satria araka ny filazako fa vao manomboka aho (na mihoatra) fa misaotra anao aho fa hanandrana hatrany.
Valiny tamin'i Jose Onty
Salama José, faly aho fa tianao ny bilaoginay. Ao anaty masaka, andramo apetraka ny legioma kely mba hahavitan'izy ireo ary amin'ny vary hafa dia mifanohitra amin'izay no mila manapaka ny ovy ho lehibe kokoa. Mirary ny soa indrindra.
noaave dia hoy izy:
Raha tokony hataoko lehibe ny mpanamory dia manao kely aho ary apetrako ao anaty lasopy ho an'ny zanako kely izany. Mampihomehy azy ireo izany.
Mamaly an'i noaave
Ataoko tsy mitovy izy ireo. Afangaro akoho, hen'omby ary henan-kisoa ary raha tokony hasiako dipoavatra dia katsahoko tongolo gasy sy persily tena manify. Rehefa vita ny pilota dia ampitaiko amin'ny lafarinina.
Raha ny marina, tiako ny pejinao. Rehefa mahafantatra olona manana thermo aho dia manoro hevitra anao aho
Misaotra betsaka, Noaave!. Mirary ny soa indrindra.
Ry zazavavy, nanao ny nahandro aho ary hita fa tsara !!. Misaotra hatrany fa manome recette mora atao ary matsiro ho an'ny lanilanitra!
Faly be aho Lourdes!
paqui martinez dia hoy izy:
Te-handray anjara aminao aho, manana ny temomix aho ary izay kely sahiko hatao dia mivoaka tsara fa mila soso-kevitra bebe kokoa aho
Mamaly an'i paqui martinez
Salama Paqui, eto dia manana resipeo maro ianao. Sahia manao azy ireo ary ho hitanao ny hatsaran'izy ireo. Manana resipeo mihoatra ny 350 izahay ary antenaiko fa tianareo. Mirary ny soa indrindra.
Hamporisika anao aho hanao ny laoka amin'ny thermo, ampy ve ny rano roa litatra? Tsy lany ve ny rano?
Valiny amin'i MERCE
Andramo izany, Merce, toa lavorary izy io. Mirary ny soa indrindra.
Ry zazavavy, nampahery ny tenako aho ary nahavita nahandro, tonga lafatra, somary matanjaka, izay novahako tamin'ny rano kely kokoa.
Faly aho fa tianao izany, Merce! Mirary ny soa indrindra.
Heveriko fa tsy afaka milaza aminao zavatra tsy fantatrao aho. Efa sahy mihitsy aza aho tao amin'ny bilaogiko nanomboka tamin'ny fizarana izay nantsoiko hoe "Ny Thermomix sy izaho" misaotra anao. Ary mazava ho azy fa mametraka ny rohynao foana aho hitsidika ny tranokala nahazoako ny fomba fikarakarana, satria mendrika izany.
Raha toa ka avelanao hanome sosokevitra aho, ary ny hevitro maotina dia efa nolazaiko taminao, mba tiako ho fantatra ny ora tokony ho lany hanaovana ny fomba fahandro, satria imbetsaka ary miankina amin'ny ora ananantsika dia efa fantatra fa tsy maintsy manapa-kevitra izahay fa inona no azonao atao mahandro sy inona no tsy. Ka amin'ny maha-mpitari-dalana azy dia tsy ho ratsy izany. Heveriko fa. Misaotra anao ary miarahaba anao indray noho ny bilaoginao.
Misaotra betsaka Nelly!
Thermomiri dia hoy izy:
Salama! Indray andro dia nanandrana nahandro azy tao anaty thermo aho ary nametraka ireo taolana tao anaty harona fotsiny aho, dia saika tsy afaka nifanaraka tamin'ny zavatra hafa intsony, ka nisafidy ny mahandro tsindry aho. Nahavita zavatra hafa ve aho? Ahoana ny fampidiran'ny hena sy taolana rehetra ao anaty harona?
Etsy an-danin'izany, miarahaba anao amin'ny bilaogy! Vita tsara be !!
Valiny tamin'i Thermomiri
Miaraka amin'ny vola apetratsika ao anaty ny fomba fahandro, mahitsy izany Miezaha mijery fa tsy mihoatra ireo vola ireo. Mivoaka manankarena be nefa ho an'ny olona 4.
Beatriz Recio Rodriguez sary placeholder dia hoy izy:
Salama, vaovao aho amin'ity Thermomix ity. Misaotra betsaka anao namorona bilaogy toa an'io satria misy mogollon sy resipeo mahaliana, Arahabaina! Zavatra iray raha azonao hazavaina amiko, ny laisoa ve andrahoina alohan'ny hametrahana azy ao anaty vera?
Valiny tamin'i Beatriz Recio Rodriguez
Salama Beatriz! Tongasoa eto Thermorecetas. Misaotra anao nanaraka anay. Faly be aho fa tianao izany ary manomana ny fomba fahitanay ianareo. Aza misalasala manoratra anay matetika araka izay ilainao.
Raha ny fisalasalanao momba ny laisoa dia apetaho RAW ao anaty fitoeram-bokatra varoma. Hotsahina ity. Ny fahasoavan'ny nahandro dia, manadino ny zava-drehetra ary manary azy rehetra.
Lazao aminay ny fomba fiasan'izy io ho anao!
Oroka iray ary faly izahay manana anao mpanaraka!
Salama Irene, misaotra betsaka anao namaly ny fanontaniako. Ary lazaiko aminao fa androany no nanaovako ny laoka ary nivoaka BE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Salama, manana fanontaniana aho, avelako ao ve ilay chorizo ​​miaraka amina foil aluminium? Ary ny sotro ny sifotra pa k dia ???
Elizabeth Sharp dia hoy izy:
Salama. Ny fanontaniako dia raha azo atao mandritra ny alina. Misaotra betsaka ary arahaba.
Valiny tamin'i Isabel Agudo
Mazava ho azy Isabel !! Raha ny marina dia hitombo ny fananany !! 😉
Efa nanana thermomix an-taonany maro aho ary tsy mbola nandraho azy. Androany no voalohany tamin'ity fomba fahandro ity. Ary tao an-trano no nahombiazany. Ny lovia kely roa efa nihinana.
Misaotra betsaka tamin'ireto resipeo ireto.
Valiny amin'i YOLANDA
Cake mofomamy misy whisky